यि महत्वपूर्ण कुराहरु मात्रै पिताबाट सिक्न सकिने :: Nepal Post Dainik यि महत्वपूर्ण कुराहरु मात्रै पिताबाट सिक्न सकिने | Nepal Post Dainik
यि महत्वपूर्ण कुराहरु मात्रै पिताबाट सिक्न सकिने
‘एक पिता सयौं शिक्षक भन्दा ठूलो गुरु हुन् ।’ हरेक व्यक्तिको सफलतामा आफ्नो बाबुको हात अवश्य हुन्छ ।
काम विशेषले टाढा रहनुपरेको नै किन नहोस्, सानो भन्दा सानो निर्णय लिनु पर्दा पनि उनको सल्लाह लिने गर्छौं ।
अभिभावकीय जिम्मेवारीमा बुबाको कुनै विकल्प नै छैन । हरेक छोरा-छोरीले धेरै कुरा आफ्नो बुबाबाट मात्रै सिक्न सक्छन् । ‘इन्टरनेशनल फादर्स डे’को अवसर पारेर यहाँ बुबाबाट मात्रै सिक्न सकिने महत्वपूर्ण ५ कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१. परिवारका सदस्यको ख्याल राख्न
परिवार सानो होस् या ठूलो हरेक बाबु आफ्नो परिवारको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा हुने गर्छन् । जब कुनै समस्या पर्छ, सबैले उनीबाट अपेक्षा राख्छन् । उनले कसैलाई निरास पर्दैनन् । आफूले दु:ख भोगेर नै किन नहोस्, गर्जो अवश्य टर्छ । प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएको ठाउँमा पनि उपस्थितिको आभाष हुन्छ । कसैप्रति आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निभाउने, यो कुरा एउटा बुबाबाट मात्रै सिक्न सकिन्छ । कसरी अरुलाई खुसी राख्ने भन्ने कुरा सिकाउने अरु कुनै इन्स्टिच्यूट नै हुँदैन ।
२. माफ गर्न
मानिस हत्तपत्त कसैलाई माफी दिइहाल्ने प्राणी होइन । हामी कसैले भूल गर्‍यो भने मुखले त माफी दियौँ भन्लाऊँ, तर मनमा तुष अवश्य बाँकी रहन्छ । यदि दुनियाँमा सारा बुबा यस्तै भए भने छोराछोरीको के होला ? बुबाको भूमिका मात्रै यस्तो हुन्छ, जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सहजै माफी दिनसक्छ । हामीले आफ्नो बुबाबाट यो कुरा पनि अवश्य सिक्नु जरुरी छ ।
३. कठिन मेहनत
कसैले आवारागिरी गरेर हिँड्यो वा परिवारप्रति जिम्मेवार भएन भने यसको विहे गरिदिनुपर्‍यो भन्ने चलन छ । त्यो भनेको जिम्मेवारीबोध गराउने प्रयास नै हो । हमीले कैयन यस्ता उदाहरण देख्न सक्छौं, जो विवाह पछि अझै सन्तान भएपछि निकै मेहनती हुन्छन् । सायदै यस्ता बाबु होलान्, जसले आफ्नो परिवार पाल्नका लागि मेहनत गर्दैन । कडा परिश्रम के हो ? त्यो कुरा पनि हामीले बुबाबाट नै सिक्न सक्छौँ ।
४. अरुबाट केही सिक्न
मानिसहरु बाबु बनेपछि धेरै जिज्ञासु बन्छन् । आफूलाई आवश्यक शिक्षा जो कोहीबाट लिन पछि पर्दैनन् । अरुबाट केही न केही सिक्ने गुणले हमेशा सफलताको मार्गमा डोहोर्‍याउँछ । त्यसैले अरुबाट कसरी शिक्षा लिनुपर्छ, यो कुरा पनि आफ्नो बुबाबाट सिक्नुपर्छ ।
५. हारपछि अवश्य जित हुन्छ
परिवारमा बेलाबखत समस्या आउने गर्छ । तर, बुबाले विचलित नभइकन सोचेर कदम चाल्छन् । उनको धैर्यता र सुझबुझले एकदिन अवश्य सार्थकता पाउँछ । यदि एउटा बाबु समस्याबाट आफैँ भाग्यो भने उसका छोराछोरीको अवस्था के होला ? सोच्नलायक विषय छ । हारमा कसरी विचलित नभइ धैर्यतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा बाबुबाट मात्रै सिक्न सकिन्छ । हारपछि अवश्य जित हुन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डसँग काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहको भेट
जसपाको केन्द्रमा ११ वटा संरचना प्रस्ताव
खाना पकाउने ग्यासको माग आधा घट्यो
जाजरकोट ः‘आत्मादेखि हाम्रा सोच, विचार र संस्कारहरु बदल्न जरुरी छ,